नयाँ दैनिक | मौसम पूर्वानुमान : दुई दिनसम्म पानी पर्ने, हावाहुरी चल्ने ! मौसम पूर्वानुमान : दुई दिनसम्म पानी पर्ने, हावाहुरी चल्ने ! – नयाँ दैनिक
चैत २२, काठमाडौँ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले दुई दिनसम्म काठमाडौं उपत्यकासहित देशको प्रायः स्थानमा हल्का वर्षा हुने र यो क्रम अझै २ दिन चल्ने जनाएको छ । सतहमा पूर्वी वायु र माथिल्लो वायुमण्डलमा पश्चिम वायुका कारण उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा शुक्रबार बिहान वर्षा भएको छ ।
देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा भए पनि त्यसको विवरण भने मौसमपूर्वानुमान महाशाखालाई प्राप्त भइनसकेको जनाइएको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अझै केही दिन हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा भइराख्ने अनुमान गरेको छ ।
सतहमा पूर्वी वायु र माथिल्लो वायुमण्डलमा पश्चिम वायु चलेकाले अबको २ दिन देशका अधिकांश भागमा वर्षा हुन सक्नेछ । सतहमा चल्ने प्रि–वायु बंगालको खाडीबाट आउने र त्यस्ता वायुले बोक्ने जलबाष्पले बादल बनाउन भूमिका खेल्ने बताइएको छ ।
वर्षासँगै हावा र हुरीको सम्भावना पनि मौसम पूर्वानुमान महामशाखाले औंल्याएको छ । विपरीत स्वभावका वायु सक्रिय भएकाले २ दिन औसतभन्दा बढी नै हावाहुरी चल्ने मौसमविद् बताउँछन् । डराउनैपर्ने हावाहुरी जाने खतरा भने छैन ।